लिखु गाउँपालिकाको अध्यक्षमा अशोक कार्की र उपाध्यक्षमा अस्मिता थापा विजयी ओखलढुंगा, ३ जेठ । ओखलढुंगाको लिखु गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका अशोककुमार कार्की विजयी हुनुभएको छ । एमालेका मिलनकुमार विष्टलाई पछि पार्दै कार्की विजयी हुनुभएको हो । मंगलवार, जेठ ३, २०७९
सिद्धिचरणका नयाँ मेयरको स्वागतमा सदरमुकामवासीद्वारा पुष्पवृष्टि ओखलढुंगा । पछिल्लो मत परिणामअनुसार सिद्धिचरण नगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर हुन् तेजेन्द्र खनाल । नेपाली कांग्रेसबाट उनी एमालेकी इच्छाकुमारी गुरुङलाई पछि पार्दै विजयी भए । मंगलवार, जेठ ३, २०७९
खिजीदेम्बा अध्यक्षमा जनता समाजवादीका गम्बु शेर्पा विजयी ओखलढुंगा । जिल्लाको खिजीदेम्बा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा जनता समाजवादीबाट गम्बु शेर्पा विजयी भएका छन् । उपाध्यक्षमा कांग्रेसबाट सुशीला तामाङ विजयी भएकी छिन् । सोमवार, जेठ २, २०७९
चम्पादेवीले पायो विकासवादी नेता, अध्यक्षमा दोहोरिए नवराज केसी ओखलढुंगा । ओखलढुंगाको चम्पादेवी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका नवराज केसी विजयी भएका छन् । यस्तै उपाध्यक्ष पदमा एमालेबाट दिलामाया मगर विजयी भएकी छिन् । सोमवार, जेठ २, २०७९
मतपत्र च्यातिएपछि चिशंखुगढीमा मतगणना रोकियो ओखलढुंगाको चिशंखुगढीमा कांग्रेस कार्यकर्ताले मतपत्र च्यातेपछि मतगणना रोकिएको छ । चिशंखुगढी गाउँपालिका ३ को मत परिणाम बराबर आएपछि पुन: मतगणना गर्दा कांग्रेस प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेका हुन् । सोमवार, जेठ २, २०७९
कस्ले जित्छ चम्पादेवीमा ? तथ्यांक भन्छ : ‘नवराजको जित पक्का छ’ ओखलढुंगा । ओखलढुंगाको चम्पादेवी गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउने भन्दै एक स्वतन्त्रसहित पाँच जना मैदानमा छन् । योग्यताको हिसाबमा पाँचै जना उत्कृष्ट देखिन्छन् । मंगलवार, बैशाख २७, २०७९
खिजीदेम्बामा महेश कोर्मोचासहित ४ को उम्मेदवारी फिर्ता (विज्ञप्तिसहित) ओखलढुंगा, २५ वैशाख । जिल्लाको खिजीदेम्बा गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले बागी उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका ज्यूँदा सहिद, कांग्रेसका पुराना तथा क्रियाशील नेता महेश कोर्मोचासहितका नेताले बागी उम्मेदवारी फिर्ता लिएका हुन् । आइतवार, बैशाख २५, २०७९
खुम्बुको दुई नम्बर लुक्लामा को बन्ला एक नम्बर ? सोलुखुम्बु । सोलुखुम्बुको खुम्बुपासाङल्हमु गाउँपालिकाको दुई नम्बर वडाका अध्यक्षका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नाम्गेल शेर्पा उम्मेदवार छन् भने एमालेबाट यस अघिकै अध्यक्ष आङफूर्वा शेर्पा र नेपाली काँग्रेसबाट दावाग्याल्जेन शेर्पा उम्मेदवार रहेका छन् । नेकपा एमालेबाट यस अघि नै वडा सम्हालीसकेका आङफूर्वा शेर्पा पुन दोहोरिन खोजेका छन् । नेपाली काँग्रेसबाट वडाध्यक्षका उम्मेदवार बनेका दावाग्याल्जेन शेर्पा गैरराजनीतिक व्यक्ति हुन् । उनी पर्यटन व्यवसाय तथा एनजीओ सञ्चालकको रुपमा उनी लुक्लामा चिनिएका व्यक्ति हुन् । माओवादीबाट उम्मेदवार बनेका नाम्गेल शेर्पा चाहीँ सानै उमेरदेखि खुम्बुमा संघष गर्दै विजिकोपार्जन गरि सेवामुलक राजनीति गरिरहेका व्यक्ति हुन् । खुम्बु प्रवेशको मुख्यद्धार भएकाले पनि लुक्ला अवस्थित दुई नम्बर वडामा अध्यक्ष कस्ले जित्ला भन्ने कौतुहल्ता जाग्नु स्वभाविकै हो । शनिवार, बैशाख २४, २०७९
भालदिपमा तीन दर्जन कांग्रेस प्रवेश मंगलवार, बैशाख २०, २०७९
ओखलढुंगामा एमालेले खाता खोल्यो, सुनकोसी ५ बाट दलित महिला सदस्य डल्लीमाया निर्वाचित मंगलवार, बैशाख १३, २०७९
ओखलढुंगामा आज दिउँसो ४ बजेसम्म ३ सय ३ जनाको उम्मेदवारी : निर्वाचन आयोग ओखलढुंगा, १२ वैशाख । ओखलढुंगामा आज भव्य रुपमा मनोनयन दर्ता भइरहेको छ । निर्वाचन आयोगले मनोनयन दर्ता गर्ने समयसीमा २ दिन छुट्याएकोमा त्यसको अवधि आज सकिँदैछ । सोमवार, बैशाख १२, २०७९